लिनप्याओवादका विरुद्ध संघर्ष - Janakhabar
एमसीसी पारित गरेर गठबन्धन सरकार र संसद्ले देशलाई नवऔपनिवेशमा धकेलेको छ । हामीले आशंका गर्दै आएझैँ संसद् सिक्किमको देशद्रोही संसद्कै स्तरमा पतन भएको छ । सांसदहरु काजी लेण्डुप दोर्जेको स्तरमा पतन भएका छन् । “कुनै पनि कारणले होस् यदि जनताले जिम्मा दिएको या खडा गरेको संस्थाले जनभावनाको नेतृत्व गर्न सक्दैन भने त्यसलाई विस्थापित गर्ने र पुरानोको ठाउँमा नयाँ संस्था स्थापना गर्ने अधिकार पनि जनताकै हुन्छ” भन्ने निष्कर्ष केन्द्रीय समितिको छ । संसद्ले जनमत, जनादेश र जनभावनाको विरुद्ध अकल्पनीय अपराध गरेको छ । त्यसको विरुद्ध सबै दलहरुभित्र विद्रोह भएको छ । काँग्रेसकै मतदाताहरु एमसीसीविरुद्ध रहेका छन् । त्यसकारण ती सबै अभिमतहरुलाई साझा संगठनमा व्यक्त गर्न सक्ने … राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राखेर एउटा फराकिलो र सशक्त मोर्चा बन्ने सम्भावनाको खोजी गर्न आवश्यक छ । हाम्रा राजनीतिक कार्यक्रम र कार्यनीतिहरु त्यस दिशामा उन्मुख हुनुपर्छ । नेपालका कम्युनिस्टहरु देशभक्तिको आन्दोलनमा दह्रोसँग उभिँदै आएका थिए । महाकाली सन्धिपछि पुँजीवादी दलहरुसँगै कम्युनिस्ट नामधारी दलहरु पनि देशद्रोहमा सहभागी भएका छन् । यो प्रक्रियाले कम्युनिस्ट विचार र धारालाई बद्नाम गर्दछ । यो कम्युनिस्ट सिध्याउने खेल नै हो ।
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अध्यक्ष माओका उत्तराधिकारसमेत भएका लिन पियाओले सर्वोच्च पद हत्याउन माओको चाकडी गरेको, त्यसबाट एक हदसम्म माओसमेत प्रभावित भएको अवस्था महत्वपूर्ण सन्दर्भको रुपमा रहेको छ । लिन पियाओप्रति विस्तारै माओ स्पष्ट भएपछि लिन पियाओविरुद्ध उभिनु भयो वा त्यसको गति अवरुद्ध पार्न थाल्नुभयो । माओबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा नभए ख्रुश्चेवसँग मिलेर अध्यक्ष माओको हत्या गर्ने षड्यन्त्र भयो । माओ बेइजिङ फर्कने रेलमा बम विस्फोट गराएर मार्ने षड्यन्त्र गरिएको थियो । तर, चनियाँ गुप्तचर विभाग (सेना) ले त्यसको सुइँको पायो । त्यसपछि ‘रुट चेन्ज’ गरेर अध्यक्ष माओलाई बेइजिङ पु¥याइयो । षड्यन्त्र पर्दाफास भएपछि भाग्दै गरेको लिन प्याओलाई चिनियाँ सेनाले पछ्याउँदै जाँदा मङ्गोलियाको आकाशमा उसको मृत्यु भयो । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निजी स्वार्थको लागि नेतृत्वको अशोभनीय चाकडी गर्ने, नेतृत्वको नजिक भएर अरुको हुर्मत लिने र त्यस प्रकारको स्वार्थ पूरा नभएपछि नेतृत्वलाई नै समाप्त पार्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई ‘लिनपियाओ प्रवृत्ति’ भन्ने गरिन्छ । हाम्रो पार्टी ने. क. पा. को सन्दर्भमा पनि लिन पियाओ प्रवृत्ति प्रकट भएको छ । फरक के भने लिन पियाओको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार चर्चामा थिएन ।
नेकपाको १२ औँ बैठकमा महासचिवको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको थियो, जसमा कसैको नोट अफ डिसेन्ट (असहमति) पनि थिएन । दस्तावेजले निर्वाचनमा को उठ्ने, को नउठ्ने ? केही भनेको छैन । दस्तावेजमा चुनाव बहिष्कार गर्ने कुरा गरेकै छैन । पारित दस्तावेज अध्ययन गर्न सकिन्छ । व्यक्तिहरुले के भने भन्ने कुरा मुख्य हुँदैन । अस्पष्ट कुराको व्याख्या गर्ने कार्य महासचिव वा प्रवक्ताले गर्न सक्छन् । बैठकको अन्तिममा क. कञ्चनले ‘प्रस्ताव समृद्ध गर्न सफल भएका छौँ । महासचिवको प्रतिबद्धताप्रति सम्मान गर्दछु । उच्च जनवादले उच्च केन्द्रीयता पैदा भएको छ भन्नु भएको थियो । त्यसैगरी, सुदर्शनले “उच्च जनवादले उच्च प्रकारको केन्द्रीयता पैदा भएको छ । पूर्वाग्रह सामन्तवाद हो । महासचिवमा केन्द्रित भएर जानुपर्छ” भनेका थिए । बहिष्कार र उपयोग दुवै कार्यनीति बेठीक छन् भन्ने आवाज उठिरहेको छ । तर, नयाँ के हो भन्ने न थाहा छ न त नयाँलाई नयाँ नै देख्न सक्ने चेतना छ । बजारका चर्चा र हल्लाहरु न प्रक्रियागत न त नैतिक नै । परिपत्रमा भ्रष्टाचारको विषय उल्लेख भएपछि कतिपय मान्छेहरु उत्तेजित भएका छन् । दक्षिणपन्थी र भ्रष्ट व्यवहारलाई क्रान्तिकारी नाराले छोप्ने प्रयास गरिएको छ । नेकपा शिवगढी भेलाको जगमा उभिएको पार्टी हो । शिवगढी भेलामा नगएकाहरुले यो पार्टी न बनाएका हुन् न त भत्काउनै सक्छन् । हाम्रो पार्टीले क्रान्तिद्वारा प्रधान अन्तरविरोधको समाधान गर्ने नीति लिएको छ । क्षणिक कार्यनीतिको आधारमा रणनीतिको नै नकारात्मक टिप्पणी गर्नु गैरजिम्मेवारी हुन्छ । किरणको बैठकबाट निस्केर दैलोमा नै एकीकृत जनक्रान्तिको प्रवक्ता बन्न खोज्नु व्यक्तिवादको चरम् नमुना हो । अझ बैठकमा बस्दै नबसेकाले बैठकको संश्लेषण गर्न लाज मान्नुपर्ने हो । महासचिव विप्लवले बैठकको समापन गर्दै “अराजकता कुनै बिन्दुमा पुगेर बिसर्जन हुन्छ” भन्नु भएको थियो । आज अराजकतावाद बिसर्जनवादको खाडलमा परेको छ ।
नेकपाको १२ औँ बैठकको पारित प्रस्ताव र परिपत्रमा एकजनाको पनि फरक मत थिएन, छैन । जहाँ बहिष्कार भन्ने कतै शब्दसम्म छैन । ‘प्रयोग गर्ने’ भनेको प्रस्ताव सिरानी हालेर सुत्ने भनेको होइन । प्रयोग गर्ने भनेको अरु कुनै पार्टीको पछुवा हुने भनेको पनि होइन । परिपत्र र प्रस्तावमा चुनावमा को उठ्ने, को नउठ्ने ? व्याख्या छैन । त्यो विषय परिस्थितिमा भर पर्दछ र त्यसको निर्णय तथा निर्देशन महासचिवले गर्ने हो र त्यसको सार्वजनिकीकरण पार्टी प्रवक्ताले गर्ने हो । त्यति प्रक्रिया पनि नबुझ्ने मनुवाहरुलाई मानसिक असन्तुलन भएका मान्छे भन्नुवाहेक के भन्नु ! शिवगढी भेलामा हामीले पार्टीको रुपरेखा कोर्दै गर्दा मोहन वैद्यको बैठकमा विराजमान हुने र प्रचण्डले कारवाही गरेपछि रुँदैरुँदै शरण खोज्दै ‘पेस्ट हुन’ आएकाहरुले भद्दा नाटक होइन, अर्को कटेरो बनाए हुन्छ ।
शीर्ष नेताहरुलाई फुटाएर नेतृत्वको नजिक पुगेर (उत्तराधिकारी) पार्टी र क्रान्तिलाई ‘सेबोटेज’ गर्ने मनोकांक्षा असफल भएपछि आफ्नो गैरमाक्र्सवादी चिन्तन र व्यवहारलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको छ । तर, गलत आचरण र व्यवहार खराब चिन्तन कै परिणाम हुन् । सुदर्शनले नेतृत्वसँग “तपाईं खाली प्रकाण्डको कुरा मात्र सुन्नु हुन्छ, मेरो कुरै सुन्नुहुन्न’ भन्नु र केन्द्रीय समितिको बैठकमा रुझेको बिरालोजस्तो अनुहार बनाएर ‘समस्या अरुका पनि छन् तर मलाई मात्र धकेल्ने काम भयो’ भनेबाट कथित दार्शनिकको दर्शन र राजनीतिको पृष्ठभागमा कुन मनोविज्ञान छ र वास्तविकता के हो ? सहजै बुझ्न सकिन्छ ।